Aretina amin'ny fiterahana ny tiroida - inona izany? Euthyroidism of the shell of thyroid - symptoms and treatment
Ny fatran'ny odyroidin'ny tovovan'ny tiroida - izay zava-dehibe, dia zava-dehibe ny mahatakatra tsara, satria ny toe-batana ara-batana dia fanairana. Mampiseho ny tsy fahombiazany amin'ny asan'ity vatana ity izany. Ankoatra izany, ny aretina lehibe dia mety hivoatra amin'ny fiaviany.
Euthyroidism - inona io?
Mba hahatakarana izany dia hanampy ny fepetra nampiasaina hanamarihana ity fanjakana ity. Avy amin'ny teny grika hoe "εὐ" amin'ny teny hoe "tsara", ary avy amin'ny teny latinina "thyreoidea" - "ny andran'ny tiroida". Noho izany dia lasa mazava tsara ny atao hoe euthyroidism. Midika ara-bakiteny hoe "fitambaran-draharahan'ny tiroida tsara" izany. Tena mahazatra ny fihetsika hormonal. Izay tsy tokony holazaina momba ny rafitry ny gland. Manomboka mampivelatra be izy io.
Inona no atao hoe euthyroidism?
Ity toe-pahasalamana ity dia heverina ho sisan-tsokosoko: amin'ny fotoana rehetra dia mety hampitombo na hihena ny hormone. Vokatr'izany dia hisy aretina lehibe hanomboka hivoatra, ohatra, ny autoimmune thyroiditis na ny mpandoto. Tena mampidi-doza ny euthyroidism amin'ny bevohoka, satria ity toe-panaintaina ity dia mety hiteraka fiantraikany goavana ho an'ny vehivavy sy ny peniny.
Koa satria ny taova rehetra dia mifandray amin'ny taova rehetra, dia mety hisy fiantraikany amin'ny rafitra toy izany ny fahasarotana:
mitebiteby - hisy ny fanafihana amin'ny alahelo, ny fahaketrahana, ny fahaketrahana maharitra, ny fanadinoana;
kardiovascular - fitomboan'ny tsindry, haingam-pandeha haingana kokoa, fitomboan'ny aretina amin'ny tsindry na aretim-po;
gynecological - mety mahatonga ny tsy fahombiazan'ny vanim-potoanan'ny ratra, tsy fahampian-tsakafo.
Euthyroidism - Antony
Maro ireo antony mahatonga ny fampandrosoana io toe-batana io. Ny euthyroidism nodular dia vokatry ny antony toy izao:
toe-java-manan'aina tsy mahomby;
ny dipoavatra enti-manavotra izay mitranga ao amin'ny vatan'ny tiroidan'ny tiroida;
tsy ampy ny fandraisana ny iodin'ny vatana;
manapoizina ny vatana amin'ny kobalta, moka, arsenika na fitarihana.
Io karazana toe-pahasalamana io dia tsy mahazatra. Ny fiarovana ny herisetra atao amin'ny autoimmune dia miteraka toe-javatra manaraka:
nanomboka karia ;
gripa vao haingana;
maharitra ela ny masoandro miposaka.
Io karazana aretina io dia fiantraikany eo amin'ny sehatry ny fanafody sasany. Euthyroidism toy izany dia dingana mandavan'andro. Taorian'ny fanafoanana ny fanafody famonoana, dia miverina amin'ny ara-dalàna ny vodilan'ny tiroida. Noho izany antony izany dia tsy mitaky fitsaboana ny toe-pahasalamana.
Euthyroidism of the shell of thyroid - symptoms
Ny ankamaroan'ny marary izay voan'ny aretina mahazo azy dia tsy mahatsikaritra izany. Ity dia lojika, satria amin'ny ambaratonga voalohany dia ny olana dia manintona. Taorian'ny fihenan'ny fidiran'ny tiroidin'ny mararin'ny tiroida amin'ny marary dia azon'izy ireo fa misy zavatra tsy mitombina ao amin'ny vatana, ary mitady fanampiana ara-pitsaboana.
Ny soritr'aretin'ny euthyroid dia mety ho betsaka kokoa:
lozabe tsy misy antony;
nampitombo ny hatsembohana ;
olana amin'ny torimaso;
fanitarana ny lalan-kely ao amin'ny tendany;
Euthyroidism 1 degre
Amin'ity dingana ity, ny fitiliana dia manintona. Ny fitsaboana ny euthyroidism dia azo avy amin'ny dokotera aorian'ny fandinihana ny marary. Amin'io dingana io dia tsy azo atao ny mamaritra ny fihanaky ny tiroida kely. Eny, ary ny palpation koa, tsy tonga amin'ny fahazavana. Ny fehin-kevitra dia tsy voafaritra afa-tsy amin'ny isthmus. Mba hahazoana antoka fa tena misy olana, ny ultrasound dia manampy.
Euthyroidism ny 2 degre
Amin'ity dingana ity dia mihamafy ny olana. Mihabetsaka ny tavy. Tadiavo izany raha tsy mandeha ny fandinihan-draharaham-peo, fa hanome fanazavana misimisy kokoa ny palpation. Amin'io tranga io, ny dokotera dia mety hanome soso-kevitra ho an'ny euthyroidism sy hypothyroidism. Ny fitsaboana marina sy azo antoka dia tsy maintsy atao raha tsy aorian'ny fandinihana lalina an'ilay marary.
Euthyroidism 3 degrees
Amin'io toe-javatra mampalahelo io, dia miharihary fa miharihary ny fihenan'ny tendrôte ny tiroida. Euthyroidism of the shell of thyroid - what does this doctor know? Noho izany antony izany dia hamafisiny ny faritra misy olana. Aorian'ny fiverimberenan'ny diffuse, ny eritioridy dia hodinihina amin'ny fampiasana ultrasound. Raha ampitahaina ny vokatra rehetra azo, dia manome fitsaboana mahomby ny dokotera.
Euthyroidism - nodal goiter
Ny fampiroboroboana ny fatran'ny tovon'ny tiroida. Ao anatin'ity dingana manaraka ity, ny fananganana ny fototeny tokana na maromaro dia miseho. Amin'ny fanafody, dia matetika izy io no antsoina hoe "euthyroidism tsy misy poizina". Ao amin'ny androbe ny tiroida, mety hisy ny fiovana toy izany:
Ny endermic goiter dia miforona . Ny anton'ny fisehoany dia ny tsy fisian'ny iodine ao amin'ny vatana.
Mitombo ny habetsahan'ny tiroid, saingy tsy misy fiorenana ao aminy.
Ny fikajiana voalohany amin'ny dingana voalohany dia ny euthyroidism. Amin'io dingana io dia hita ao amin'ny tendrony ny tiroida.
Nodular goiter de 2 degrees nodules.
Ny Pathology, izay ahitana firafitra maro ao amin'ny androbe ny tiroida.
Euthyroidism - Diagnosis
Mba hijerena tsara sy hikaroka fitsaboana mahomby dia halefa amin'ny dokotera ilay marary. Euthyroidism of the shell of thyroid - what it is, the doctor knows for sure, so he would like to receive full information about the condition of the person applying. Ny diagnostika dia ahitana fomba toy izany:
fanaraha-maso ny maso sy fisainana;
Ny fitsaboana amin'ny fitsaboana ho an'ny thyrotropine sy iodothyronine dia nomena;
ny ultrasound dia tanterahana;
Natao ny biopsy sy ny scintigrafy .
Raha toa ka miseho amin'ny fiterahana ny tebiteby, dia mety tsy ho vitan'ny dokotera ihany ny dokotera. Maka ny toe-javatra eo ambany fifehezan'ny tenanao izy. Midika izany fa tsy maintsy miseho matetika amin'ny marary ny marary, mba hahafahan'ny dokotera manara-maso ny fahasalamany ary, raha ilaina, dia mamaly amin'ny fotoana mety amin'ny toe-javatra miova.
Euthyroidism - fitsaboana
Ny fitsaboana io toe-pahasalamana io dia mikendry ny hamerenana indray ny tavy. Misy fomba fanao mahazatra ampiasaina amin'izany. Aretina amin'ny fiterahana ny tiroida - izany hoe hanazava amin'ny an-tsipiriany amin'ny marary ny dokotera. Ankoatra izany, dia hanome ny soso-keviny momba ny sakafo izy ary hanolotra fanafody. Na izany aza, ny dokotera dia mahafantatra ny fomba fitsaboana euthyroidism tsy vitan'ny dokotera, fa koa amin'ny fanampian'ny fomba fanao. Ny fomba mahomby hafa dia hotendreny ho fitsaboana fanampiny.
Mba hiantohana fa ny olana hita amin'ny ambaratonga voalohany dia tsy mihamitombo, dia zava-dehibe ho an'ny marary ny manaraka ny fepetra fisorohana. Izany dia hampihena ny mariky ny toe-pahasalamana toy ny aretina tiroida, ny soritr'aretina sy ny fitsaboana dia tsy hilaina any aoriana. Noho izany, ny marary dia mila:
Ampitomboy ny fisehoan-javatra mampikorontan-tsaina.
Indroa isan-taona hanome rà ny famaritana ny habetsaky ny thyrotropine.
4-5 volana isaky ny ultrasound.
Aza avela hiparitaka be ny masoandro, ary aza mitsidika ny solarium.
Mialà amin'ny fahazaran-dratsy - mifoka sigara, misotro toaka.
Raha toa ka tsy mahomby ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina ary miharatsy ny toe-tsain'ny tiroida, dia afaka manoro ny fidirana amin'ny fitsaboana ny dokotera. Mandritra ilay fandidiana, dia hanao fisarahana maromaro ilay dokotera. Amin'ny alalan'izy ireo, dia hesoriny ny ampahany betsaka amin'ny tendrontany boribory. Matetika, aorian'ny fidirana amin'ny fitsaboana toy izany, dia manasitrana haingana ny fisintonana ary tsy hita intsony ny marariny. Ny fahasarotan'ity fomba fitsaboana ity dia ny dokotera mila mamaritra tsara ny habetsaky ny tranonkala tokony hesorina. Raha mandritra ny fotoam-pandihizana dia harefo ny siramamy noho ny tokony ho izy, izany dia mitarika ho amin'ny fivoaran'ny hypothyroidism.
Euthyroidism - fanomanana fitsaboana
Ao anatin'ny ady amin'ity toe-javatra mahatsiravina ity, dia azo ampiasaina ireto regimens manaraka ireto:
Fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina misy ny iodine - io fomba io dia mahomby amin'ny dingana voalohany amin'ny fampandrosoana ny toe-pahasalamana. Matetika ny fanafody toy izany dia azo atao: Antistrum, Camphyod, Microroyod. Ny dosage isan'andro dia 200 mg. Io vola io dia ampy hampitsaharana ny fihanaky ny sela ny tiroida. Ny fikarakarana toy izany dia manome vokatra tsara, satria mikendry ny hiady amin'ny tena izy.
Ny fitsaboana simetera (mampiasa ny levotiroksin sodium drug) - dia misy fiantraikany amin'ny hormonina ao amin'ny toeram-pitsaboana. Ny fitsaboana toy izany dia manome fanaraha-maso tsy tapaka. Miaraka amin'ny fanafoanana io fitsaboana io, dia mety hiverina ny euthyroidism.
Fandefasana simultaneous iodine sy levothyroxine sodium. Tena tsara ny fandaharam-potoana raha toa ka tafaverina haingana indray ny tosidra kely. Ankoatr'izany dia tena kely ny mety hitranga.
Euthyroidism ny tovovan'ny tiroidia - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Ny "fanomanana" homemade dia ho tonga hanampy, mifototra amin'ny zavamaniry. Iray amin'ireny ny zyuznik. Ny famokarana fanafody dia tsy maintsy tapaka ao anaty milina kafe amin'ny vovony. Avy eo dia mifangaro amin'ny tantely mitovy tantana izy io. Raiso io fitahirizana aretin-tsaina io dia tokony intelo isan-kerinandro alohan'ny sakafo ho tsoka 1 tsp iray isam-bolana. Ny vokatra tsara dia efa voamarina taorian'ny 2-3 herinandro taorian'ny nanombohan'ny nandray ny "zava-mahadomelina".
Euthyroidism - fitsaboana aretin-tsika amin'ny alàlan'ny famoahana baolina Baikal
bozaka maina - 5 tbsp. lovia kely;
divay mena maina - 700 ml.
Ny divay dia atsipy ao anaty boivoy iray, apetraka eo amin'ny fatana ary entina amin'ny vay.
Manampy eto Baikal skullcap.
Aforeto ny roapolo amin'ny rindrina, aforeto ny afo kely amin'ny "kely" ary "mandrora" mandritra ny 10 minitra.
Esory avy ao anaty afo ny lovia ary avelao halevina mandritra ny 3 andro ny rojo.
Afindrao ny zava-mahadomelina ary ento 1 tbsp. sotro 4-5 isaky ny andro.
Arovy ny fitsaboana sisa tavela ao anaty fitoeram-bintana vita amin'ny tombo-kase ao anaty vata fampangatsiahana.
dreny - 50 g
masomboly mavokely - 25 g;
ravinkazo mainty hoditra - 50 g;
kerobima - 50 g;
Icelandic centrarium - 100 g;
rano - tokony ho 1 litatra.
Ny zavamaniry rehetra, ny voa ary ny voa rehetra dia miorina amin'ny kofehy mofomamy ho vovoka.
Mialà sasatra eo amin'ny fonosana iray ary arotsaho ny fanangonana amin'ny rano mangotraka. Ny isa voatokana dia 1:10.
Apetraho eo ambony afo ny roimemy ary omeo ny ao anatiny 10 minitra.
Esory avy eo amin'ny takelaka.
Afangaroy ny ravina ary atsipazo izany.
Tokony ho 2 tbsp. kibay intelo isan'andro. Fitsaboana ara-pahasalamana - 2 volana.
Euthyroidism - sakafo
Ao anatin'izany toe-javatra marary izany, ny marary dia tokony hifantoka manokana amin'ny sakafony. Tokony hanan-karena amin'ny vokatra manan-karena iodina ny sakafo:
Ankoatra izany, zava-dehibe ny hanatsara ny sakafo amin'ny sakafo avo lenta. Ny vokatra toy izany dia hanampy amin'izany:
ny afon-tsakafo ary ny buckwheat;
Ny vondron'olona euthyroidism sy ny lanjany tafahoatra dia tena tsy fahita firy. Matetika io aretina io no voamarika. Ny fihenan'ny fihinanana sakafo mahazatra dia avo efatra heny isan'andro. Zava-dehibe ho an'ny marary ny fahatakarana tsara ny euthyroidism ny vatan-tsiriry - inona io ary inona no tokony hozongozonina. Sarobidy ny lisitry ny sakafo voarara:
hena sy trondro matavy;
dite mafy sy kafe;
Ny faritra havanana dia manjary eo ambanin'ny taololo aorian'ny sakafo
Ny fitsaboana amin'ny Miramistine ao anaty tranokala
Cardiomagnet - ny soa sy ny loza ateraky ny fitsaboana malaza
Sodium thiosulfate intravenously
Ny rongony amin'ny vavony amin'ny barium - vokany
Nisalasala aorian'ny alikaola - inona no tokony ataoko?
Sakafo avy any am-boalohany
Grika sy andriamanibavin'ny Grika
Hazo kanto amin'ny tanana manokana
Afovoany ho an'ny fandoroana volo
Navoakan'i Mom Cristiano Ronaldo sary iray miaraka amin'ireo zaza vao teraka
Ahoana no hambolena tongolo lay ho an'ny ririnina?
Ambasadin'i Albania any Belarosia
Jeans amin'ny tarika elastic - sary 30 ahitana sary maoderina ho an'ny tsirony rehetra
Herinandro amina kindergarten - décoration
Egregor - inona moa izany, ahoana ny fomba iasan'izy ireo sy ny karazana fitoraham-bato?
Tsy te hiaina miaraka amin'ny reniny intsony ny zanak'i Madonna
Rassolnik amin'ny tambajotra iray - fomba mahandro sakafo rassolnik?
Justin Bieber dia nankasitraka ireo mpankafy niaraka tamin'ny sary hafa tsy mitafy